Maxay tahay sababta Ciidamada ajaanibtu u Laayaan shacabka soomaaliyeed
By ibrahim Aden shire August 26, 2017
Bishan gudaheeda waxaa dhacday sadex dhacdo oo si arxan darro ah loogu xasuuqay dad rayid ah oo aan waxba galabsan. sadexdaan fal waxay ka kala dhaceen sadex gobal oo kala duwan waxayse wadaagaan in dhibku ay gaysteen ciidamo aan soomaali ahayn.
Waxaa la is waydiin karaa ciidamada Soomaalidu kuwaan ma dhaamaan maxaase keenay inay kuwa aan soomaalida ahayni dadka iska laayaan. si aan u fahano in ciidamadeenu ka anshax wanagsan yihiin kuwa ajaanibta ah, kana fiican yihiin sida dadku u haysto waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago dhacdooyin ay qayb ka ahaayeen ciidamo soomaaliyeed.
01/07/2013 ayaa ciidama isugu jiro Itoobiyaan iyo soomaali lagu weeray deeganka Quraan googoo ee duleedka tuulada maykaareebey. Ciidanka dowlada Soomaaliya wuxuu u qeybsanaa labo ciidan: Dhibbow kasoo baxay tababar loosoo xirey iyo ciidan ka tagay Garbahaareey oo howlgal u aaday Daawo ( luuq Dolow iyo Beledxaawo).
Dagaalku wuxuu kubilowday si gaadmo ah oo ciidanka dowlada ee uu hogaaminayay abaan-duulaha guutada sagaalaad ee ciidanka xooga dalka Cisman Cabdi Qorax ayaa lagu qaaday. wuxuu ka dhex qarxay meel dad reer baadiye dagan yihiin waxaana lagu dilay talihii ciidan ka dhibbowga kasoo baxay, taliye Baashi, waxaa ladhaawacay, talihii howlagalka degdega ah ee guutada sagaalaad Ali Jiijiile, waxa lagubay laba gaari oo kuwa dagaalka ah dhimashada ciidanka Somaliya waxay gaartay 9 askari.
Dagaalka kadib waxaa la qab qabtay dad badan oo xoola dhaqato ah. Waxaa looga shakiyay in ay aqbaar siiyeen ALshabaab ilaa 10 qof ayaa la qabtay. Markii la ogaaday in ay yihiin dad aan waxba la galabsan oo lafahoooda u sigtay meeshana horay daganaa ayaa la iska siidaayay iyadoo xagtin la gaarsiin.
Maalinti xigtay (02/07/2013) ayaa hadana dagaal labaad wuxuu ka qarxa tuulada Maykaareebeey, wuxuu ahaa mid gaadmo ah sidii kii hore oo kale, markaan si siman ayuu u heleelay ciidan Itoobiya iyo kan Somaaliya, waxaa la dilay 5 Ethiopian ah 2 askarta Somalida ah waliba Itoobiyaanka qoryohoodii waa laqaatay, waxaana lagu soo bandhigay degmada Buurdhuubo 4/7/2013.
Dagaalkaan labaad wax badan ayuu socday meeshii uu ka bilowday maahane, wuxuu gaarey meelo ka fog oo dad aan waddo u dhaweyn oo aan fileyn in uu soo gaarayo dagaalku ayaa la isla galay. ka dib, ciidanku waxay baareen guryaha dadka deegaanka ilaa sariiraha hoostooda, waxaana la qabqabtay qofkasto oo loo meesha ka dhawaa. waxaa labaaryayay habeenkii labaad ilaa 3/07/2013 ayaa la joogay.
Makra laga tago argagaxa, cabsiada iyo qaqabashada, ma jirin hal qof oo wax la yeelay. Markii la xaqiijiyay in ay shacab yihiin waa la sii daayay. Dadka qaar markiiba waa la aqoonsaday, qaarna waqti badan bay qadatay in la xaqiijiyo inay rayid yihiin iyo in kale.
Dadka lama jirdilin ee waa la wereysanayay, ugu danbeyna waxaa la raadinayay qof asaga yaqaano islamarkaana ciidanku garanayaan oo xaqiijiyo in uusan aheyn nimankii laraadinayay.
Inkastoo ciidamada dowladda dad badan laga dilay oo ay ku jireen saraakiil sare hadana kama aysan aargoosaan dadka rayidka ah ee ay qabteen, sababtoo ah way u damqanayeen waxayna ogaayeen inaysan jirin wax u ogalaan karo laynta dadkaan aan Shabaab ku shuqul lahayn.
Arrimaha aan kor kusoo xusay waxay tilmaamayaan inuu jiro ciidan Soomaaliyeed oo damiir leh, ka naxo dadkiisa dalkiisana u adeego.waxaa cad in dalkaan ay difaaci karaan kaliya ciidan dhiigiisa u bixin karo dadkiisana badbaadsan karo.
Maxay AMISOM iyo Maraykanka sidaan u diiday?
Labo arimood ayaa ugu muhiimsan sababta ay ciidamada ajaanibtu dadka u laynayaan. kow, waa cabsi iyo argagax ay qabaan. waxay baqayaan dhulka oo dhan geedaha ayaa shabaab ula muuqdo sidaa darteed shimbirti buubtaba yaysan kaala hormarin ayay xabad ugu ridaan. arintaas ayaa horseedo inay le'daan dad rayid ah oo beerahooda iska falanayo
Labo, waxay ogyihiin inaysan jirin cid wax ka waydiinayso tacadiyada ay gaysanayaan sidaa darteed uma aaba yeelayaan falalkooda. Dabcan haddi aysan jirin cid ay ooga cabsadaan iyo hilib u danqanayo toona waa inay u dhaqmaan siday doonaan.
Maxaa la Gudboon dowladda?
Dowladdu waxay madax u tahay shacabkeeda. waajibka koowaad oo saarana waa ilaalinta bad-qabidda dadkeeda sidaa owgeed waa inay xil iska saartaa ilaalinta nafta dadka rayidka ah iyo sharafkooda. waa inay hubisaa in ciidamo soomaaliyeed hogaanka howl-gallada qabtaan. Sidoo kale waa inaan la fulin howlgal aan la sii ogaysiin maamulka deegaanka weerarka lagu yahay.
ugu danbayn dowladdu waa inaysan dayicin dhiiga dadka soomaaliyeed ee dhamaaday. waa inay magdhow iyo raali galinba ka bixisaa dhibaatooyinka soo gaarayo dadka rayidka.
Eebe ayaa waafajinta leh